Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'I-Wolf Creek 3' Ikhethwe yi-Altitude Film Sales ye-Cannes Virtual Market
by Waylon Jordan June 21, 2021
I-Altitude Film Sales ithathe amalungelo okuthengisa emhlabeni wonke we I-Wolf Creek 3 ngaphandle kwe-Australia neNew Zealand. Le nkampani kulindeleke ukuthi yethule ifilimu ye-franchise kubathengi be-Cannes Virtual Market kuleli sonto.
UJohn Jarrat ulingisa indawo kaMick Taylor efilimini entsha ethola umndeni waseMelika ohamba ezindaweni zasemaphandleni zase-Australia lapho bezithola bebanjwe khona ngumbulali obulalayo. Ngokushesha, izingane zomndeni ziyaphunyuka futhi ukuzingela kuqhubeka njengoba uTaylor ebalandelela ezweni lonke cishe abe yingozi njengaye.
Umlingisi udlale uTaylor ngamafilimu amabili nochungechunge lwethelevishini olwandise izinganekwane ze-franchise. Ukusebenza kwakhe kungenye yezinto ezesabekayo esake sazibona. Amafilimu amabili okuqala neziqephu ezintathu zochungechunge ziqondiswe nguGreg McLean (I-Gloaming). Ifilimu yakamuva iqondiswe nguRachele Wiggins noMcLean odidiyela eceleni kukaBianca Martino noKristian Moliere.
iHorror izokugcina uthunyelwe kuzindaba ezengeziwe mayelana I-Wolf Creek 3 njengoba itholakala. Okwamanje, hlola umsebenzi omusha wobuciko wefilimu bese usazisa ukuthi ucabangani nge-franchise kumazwana angezansi!
Ngokwethembeka, ngabe ukhona umbuzo lapho kuzoba khona negazi lapho uMick ezibandakanya?
Ukuthengisa kwe-Altitude FilmCannesUJohn Jarratmick taylorWaylon JordanI-Wolf Creek 3
Izeluleko Ezintsha ZikaDexter Ekubuyeni KweNdodana Yakhe Harrision